လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများကို အသိပေးကြေငြာပြီ – Popinvdo
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်မည်ဖြစ်သဖြင့် ပြည်သူများကို အသိပေးကြေငြာပြီ
၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိခရိုင်နှင်.မြို.နယ်များတွင် ( ၆၆ )ကေဗွီ၊ (၃၃)ကေဗွီဓာတ်အားခွဲရုံများ၊Distribution Transformerများထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ရေရှည်ဓာတ်အားတည်ငြိမ်ပြည်.ဝစွာ ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဟောင်းနွမ်း၍ ဝန်အားမနိုင်တော.သော (၁၁)ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများအား လျှပ်ကာပါသောဓာတ်အားလိုင်းကြိုးအသစ်များဖြင်. လဲလှယ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ( ၈.၁.၂၀၁၉)ရက်နေ. (အဂါင်္နေ.) နှင်. (၁၀.၁.၂၀၁၉) ရက်နေ. ( ကြာသာပတေးနေ.)တို.တွင် ( ၀၉း၀၀)နာရီ မှ (၁၂း၀၀) နာရီ အချိန် အထိ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အချိန် အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရန်ကင်း၊ဗိုလ်တစ်ထောင်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊တာမွေ၊ သာကေတ၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း၊ ဒဂုံတောင်၊ တောင်ဥက္ကလာ၊သင်္ဃန်းကျွန်း၊ဒေါပုံ၊ပုဇွန်တောင်၊ ကမာရွတ်၊အလုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ လမ်းမတော်၊ဗဟန်း၊ လှိုင်၊လသာ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာ၊ လှညိးကူး၊မှော်ဘီ၊တိုက်ကြီး၊ဖောင်ကြီး၊ဒါးပိန်၊အင်းတိုင်၊မြောင်းတကာ၊ဥက္ကံ၊ထန်းတပင်၊ထောက်ကြန်.မြို.နယ်များရှိ ရပ်ကွက်အချို.တို.တွင် အဆိုပါရက်များ ၌ အချိန်ပိုင်းဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု အနည်းငယ်ရှိနိုင် ပါသည်။
၂။ ထိုသို. လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုလျော.နည်းစေရန်အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင်. ယာယီ ဓာတ်အားပြတ်တောက်ရခြင်းအတွက် လူမှုရေးအခက်အခဲများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မှုများအပေါ် နားလည်ခွင်.လွှတ်ပေးပါရန် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ အများပြည်သူများထံသို. လေးစားစွာ အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါ သည်။
Previous Article ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျောင်းသင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ကြားပို့ချပေးနေသော သြစတြီးယားနိုင်ငံ ဗစ်တိုးရီးယားမြို့လေး
Next Article သက်စွန့်ဆံဖျား ထောင်ဖောက်ပြေးပြီးမှ အပြင်မှာ အေးလွန်းလို့ ထောင်ထဲ ပြန်ဝင်လာတဲ့ အအေးကြောက်သူကြီး . . . .